MURUGO: Real Madrid Oo Si Toos Ah U Baahin Gaadhay Geerida Saxiixa Cusub Ee Eder Militao Iyo Dhibaatadii Shirka Jaraa'id Ku Haleeshay. - Gool24.Net
MURUGO: Real Madrid Oo Si Toos Ah U Baahin Gaadhay Geerida Saxiixa Cusub Ee Eder Militao Iyo Dhibaatadii Shirka Jaraa’id Ku Haleeshay.
July 10, 2019 Mahamoud Batalaale
Saxiixa cusub ee kooxda Real Madrid ee Eder Militao ayaa ku dhex suuxi gaadhay shirkii jaraa’id ee lagu soo bandhigayay waxayna Madrid halis u gashay in ay si toos ah u tabiso geerida saxiixa cusub ee kooxdeeda kadib markii uu la kulmay arin layaableh.
Eder Militao ayaa ku qasbanaaday inuu soo gaabiyo shirkii jaraa’id ee lagu soo bandhigayay ka dib markii uu ku dhawaaday inuu suuxo isla markaana uu wajahay xaalad argagax leh oo aduunkii daawanayay naxdin ku reebtay.
Real Madrid ayaa maanta tijaabada caafimaadka marisay Eder Militao kaas oo ay bishii March bixisay lacagta heshiiskiisa lagu burburin karayay oo 50 milyan yuro ahayd balse maalintiisii ugu horaysay ee Madrid ayaa noqotay mid naxdin reebtay.
Laakiin Militao ayaa caafimaad darro ay ka muuqatay markii ay saxaafada su’aalo weydiineysay madaama heerkulka caasimada Spain uu ahaa mid aad u sareeyay, wuxuuna Eder Militao dhex galay xaalad ay adag tahay in qoraal lagu xusi karo.
Militao ayaana sheegay inuu dareemayo wareer markii uu ka qeyb qaadanayay shirka jaraa’id, waxa uu u muuqday mid suuxi gaadhay isagoo koob biyo ah cabay si uu isku qaboojiyo.
Eder Militao ayaa markii hore furan kari waayay biyaha horyaalay waxaana loo dhiibay koob biyo ah kaas oo markii uu xataa cabay ay xaaladiisu degi wayday.
Laakiin kuleylka jiray ayaa ka tan batay Militao taasoo ku qasabtay inuu soo gaabiyo shirkiisa jaraa’id oo uu isaga baxo qolka saxaafada ee Santiago Bernabeu.
Eder Militao ayaa cunaha ama dhuunta isqabtay wuxuuna u muuqday mid neeftu ay ku taagan tahay wuxuuna yidhi: “Waxaan dareemayaa wareer. Waxa ay ii tahay maalin qiiro leh”
Eder Militao oo jamaahiirta Real Madrid la hadlayay ayaa yidhi: “Waxaad filan kartaa ciyaaryahan tartama oo wax walba idiin hura. Waxaan u ciyaari doonaa sida inay mar walba tahay kulankeygii ugu danbeeyay.”
Halkan ka daawo wixii Eder Militao ku dhex qabsaday shirkiisii jaraa’id ee lagu soo bandhigayay
Real Madrid had to cancel Éder Militão's press conference in the middle of his speech because he felt dizzy and almost fainted.
Insane. 😳 pic.twitter.com/h3gTbICNDa
— Football Tweet (@Football__Tweet) July 10, 2019
Nolosha Eder Militao ayaa halis gashay iyada oo uu xanuun badan dareemay isla markaana uu isku qasbayay in uu wax badan qarsado laakiin markii uu xanuunku ka tanbatay waxa uu qarsan kari waayay xaalada uu ku dhex jiray.
Inkasta oo muuqaalka dhacdadani uu markii hore soo galay barta twitterka, haddana meelo badan oo la soo galiyay ayaa laga saaray iyada oo u muuqata in la dhawrayo khusuusiyaadka Eder Militao oo xanuun ku qasbay in uu joojiiyay shirkii jaraa’id ee uu qabanayay.